Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo si balaaran loogu soo dhoweeyay Muqdisho muddo afar sano kadib – SomaliaOne News Network
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo si balaaran loogu soo dhoweeyay Muqdisho muddo afar sano kadib
Sep 22, 2016 Hussein Nur WARARKA 0 701 Views By Hussein Nur
Madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed oo dadweyne ay ku soo dhoweeyeen Muqdisho Afar sano kadib markii uu banneeyay kursiga Madaxtinimada dalka.
Mogadishu, September 22, 2016.
Muqdisho, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Madaxweynihii hore ee Dowladdii Federaalka KMG aheyd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo muddo afar sanadood ah ka maqnaa dalka , ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Muqdisho.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed waxaa garoonka diyaaradaha Aden Abdulle Osman ee Magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyeen Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo masuuliyiin kala duwan oo xilal hore uga soo qabtay dalka .
Dadka soo dhoweeyay Madaxweynihii hore ayaa waxaa ka dhex muuqanayay Duqii hore ee Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” oo hadda ah Musharax Madaxweyne.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo fadhiya Qeybta VIP ee garoonka diyaaradaha Aden Abdulle ee Magaalada Muqdisho.
Inkastoo bahda Warbaahinta loo diiday inay muuqaallo ka soo duubaan gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ayaa hadana Waxaa la sheegay in Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed inuu Nairobi horay uga soo kaxeystay Koox Weriyeyaal ah si ay muuqaalka uga duubaan xilliga uu diyaaradda ka degaayo iyo soo dhoweyntiisa.
Kumanaan dadweyne ah ayaa waxa ay buux dhaafiyeen wadada isku xirta garoonka diyaaradaha Muqdisho illaa iyo KM 4, iyagoo soo dhoweynayey Madaxweynihii hore.
Madaxweynihii hore ayaa socod lug ah ku maray wadada isku xirta garoonka diyaaradaha Muqdisho illaa iyo KM4, isaga oo salaamayay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Shariif Sheekh oo dadweynaha isku soo baxay u ujeediyay khudbad kooban ayaa uga mahad celiyay soo dhoweyntiisa.
Madaxweynihii hore ee dowladdii FKMG aheyd Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo maalmaha soo aadan musharaxnimadiisa xilka Madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Shariif Sheekh Axmed ayaa September, 2012 looga guuleystay doorashadii Madaxtinimada ee Soomaaliya, guushana waxaa helay xilligaasi Madaxweynaha xilligan waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud.
Soomaaliya ayaa August 21, 2012 ka baxday Marxaladdii Kumeel gaarka aheyd (KMG) ee ay in muddo ah ku jirtay kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya January 26, 1991.
Madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed .
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo ay ka muuqato kalsooni weyn ayaa Muqdisho laga dejiyay guri ku yaalla Xaafadda Buulo Xuubey ee degmada Wadajir , halkaasi oo ilaalo xoogan ay ku sugayaan amnigiisa.
Doorashooyinka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Madaxweynihii hore ee Dowladdii Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, Shariif Sheekh Axmed
ICJ: Xeer beegtida mataleysa Soomaaliya oo ka jawaabi doonta su'aallo ay soo gudbiyeen xeer beegtida Kenya Amiin Caamir, halyey qalinkiisa ku difaacay xuduud badeedka Soomaaliya
Soohdinta sarkaalka dadweynaha ee...
Muqdisho, Soomaaliya ( SOMALIAONE.NET) - Amiin Caamir “ AMIN AMIR” Waa Farshaxaniiste, Sawir sameeye, curiye iyo maskax maal u dhashay...